Oraahda Daniel Lacalle: 35-ka weedhood ee ugu wanaagsan iyo cidda uu yahay | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Casudi casals | 29/07/2021 09:00 | Dhaqaalaha guud
Uma baahnid inaad ku noolaato Wall Street si aad u noqotid hoggaamiye dhaqaaleyahan una gudbiso caqligaaga. Tan waxaa lagu muujiyey weedhaha Daniel Lacalle, dhaqaaleyahan Madrid ah oo difaaca difaaca xorriyadda dhaqaalaha. In kasta oo aanu ka mid ahayn dadka ugu taajirsan adduunka, haddana wuxuu leeyahay daraasado iyo waayo-aragnimo ku filan oo isaga ka dhigaysa inuu xirfad weyn ku leeyahay waaxda.
Maqaalkan waxaan ku taxaynaa 35-ka weedhood ee ugu fiican Daniel Lacalle waxaanan ka hadli doonaa taariikh nololeedkiisa si aan u sii kobcinno aqoonteenna ku saabsan mawduuca.
1 35-ka weedhood ee ugu fiican Daniel Lacalle
2 Waa kuma Daniel Lacalle?
2.1 Halkee ayuu ka shaqeeyaa Daniel Lacalle?
2.2 Muxuu darsaday Daniel Lacalle?
35-ka weedhood ee ugu fiican Daniel Lacalle
Way cadahay inay tahay inaan waxbadan ka barano qaladaad iyo inaan waxyaabo cusub lafteena ku ogaanno. Si kastaba ha noqotee, weedhaha Daniel Lacalle, iyo sidoo kale dhaqaaleyahanno badan oo caan ah, Waxay in yar nagu hagi karaan waxayna naga caawin karaan inaan si fiican u fahamno sida adduunku ugu shaqeeyo dhaqaale ahaan. Sababtaas awgeed waxaan hoos ku soo bandhigi doonnaa 35-ka weedhood ee ugu fiican Daniel Lacalle:
"Haddii aad injineer siiso waqti iyo lacag kugu filan, wuxuu heli doonaa xal."
"Si aad u guuleysato waxaad u baahan tahay inaad xiriir weyn la yeelatid iyo taageerida lamaanahaaga."
“Sababta keentay guuldarada weyn ee hantiwadaagga adduunka waa iska fududahay: kuwa aan ka faa'iideysan kuwa wax ka tara. Ma jiraan wax dhiirrigelin ah oo loogu talagalay kuwa dadaala, abaalmarinna waa la siiyaa kuwa ka fogaada shaqada iyo mas'uuliyadda. Heer sare lama abaalmariyo, waligeed lama gaaro, maadaama badankood hoos u riixaan. "
Dhiirigelinta xorriyadda qofka ayaa ka bulsho iyo caddaalad badan tan la doonayo in lagu cabudhiyo nafsaddaada iyadoo la wajahayo faa iidooyinka la filayo ee tirada badan. Sababtoo ah shakhsigu waa ka sadaqaysan yahay oo waa ka deeqsi badan yahay gobolka ugaarsiga ee la filayo inuu maamulo oo dib u qaybiyo hantida. "
“Maxaa dhici lahaa haddii gawaarida korontada ama gaaska dabiiciga ay bilaabaan inay qaataan saamiga suuqa oo ay ka fogyihiin waxyaabaha laga soo saaro saliida? Dowladaha wax cunaya waxay shaki la’aan raadin doonaan qaabab ay ugu beddelaan canshuuraha lumay canshuuraha kale ee korontada ama gaaska dabiiciga ah. "
“Austerity ma jecla. Austerity xanuun Laakiin musalafnimada ayaa ka sii careysiin badan, iyo dad badan oo intaas ka sii badan iyo waqti dheer. "
“Nidaamyada fara-gelinta waxay had iyo jeer ka fikiraan masaakiinta. Taasi waa sababta malaayiin iyaga ka mid ahi sanad walba wax u abuuraan. "
Xorriyad ma jirto, haddii aysan jirin xorriyad dhaqaale.
“Isbaanishku wuxuu sheegay inuu xakameynayo deynta. Lindsay Lohan waxay sheegtay inaysan ahayn qof balwad leh.
"Maal-galiye ahaan, waa in la ogaadaa in midkoodna madaxda shirkadaha, falanqeeyayaasha hay'adda ama dillaaliintu aysan la kulmi doonin cawaaqib xumo xagga xirfadda ah si ay u soo bandhigaan saadaalno xad dhaaf ah."
“Tamarta waa inay ahaataa mid raqiis ah, fara badan oo la awoodi karo. Qiimaha, helitaanka iyo sahlanaanta gaadiidka iyo keydinta. Inta kale oo dhan waa sheekooyin. "
"Warshaduhu had iyo jeer waxay maalgashi ka gaystaan ​​aaminaada beenta ah ee ah inaysan jirin cid kale oo samaynaysa waxay samaynayso."
“Haddii hal shay ay cadaato, waa in foostadii ugu dambeysay ee saliida aysan noqon doonin mid qiimihiisu yahay malaayiin doolar. Waxay noqon doontaa qiimo eber. "
Dhibaatadan ayaa aad uga xun furiin, waxaan lumiyay kala bar lacagtayda laakiin wali waan guursaday.
“Faa’iido, faa’iido iyo faa’iido. Kuwani waa saddexda tiir ee istiraatiijiyadeyda maalgashi ahaan. "
Daynta lafteeda ma xuma. Deynku wuu xun yahay marka uusan keenayn wax soo noqosho ah. "
Sanduuqa dheelitirka, raasamaalka shaqada iyo lacagta caddaanka ah intaas oo dhan ayey dhahaan, Daniel, akhrinta xaashiyaha dheelitirka waxaad ku ogaan doontaa in adduunku waalan yahay.
"Yey ku kalsooni badan yihiin, qof khamaara lacagtooda oo falanqeeya xaqiiqda ama qof eedeynaya - ama hela codad - si uu u qariyo?"
“Dhammaan qawaaniinta adduunka ka jira ma ahan kuwo keenaya dhaqanka iyo caqliga saliimka ah. Waa inaad naftaada ogeysiisaa, waxbarto. Maahan madadaalo, laakiin waa habka kaliya. Haddana waan khaldami doonnaa mar uun.
“Daynta waa daroogo, waan ku celcelinayay buugga oo dhan. Waxay daruuro ka dhigeysaa qiimaha miyir-qabka, waxay naga dhigeysaa inaan dareemo xoog badan, awood leh, waxay naga dhigeysaa inaan ku aragno xilligan midab jilicsan iyo xitaa mustaqbal badan. Waana khiyaano maxaa yeelay deynta, sida daroogada oo kale, wax kale ma ahan adoonsi ... "
“Maanta waxaa jira fikir fikir dhaqaale oo hadda jira oo ah in Dawladdu tahay hay'ad go’aankeeda dhaqaale si dabiici ah loola jeedo sidaa darteedna waa in la cafiyaa khaladaadkeeda. Dhexdhexaadiyeyaashu waxay rajaynayaan inaad dareentay cidhiidhi, oo aanad xal kale u arkin isla markaana aad aqbasho inaysan jirin wado kale oo looga baxo oo aan ahayn inaad isu dhiibto dalabaadka dowladaha.
“Saxaafaddu waxay xusuusataa oo keliya suuqyada markay wax khaldamaan. Sababta Sababtoo ah waxaan ku jirnaa dhaqaale meesha ganacsiga maaliyadeed lagu nacay fikirka. "
Dhaqan dhaqaale la'aan, khiyaanooyinka ayaa sii muuqan doona. Aad ayey muhiim u tahay in dadweynaha guud ay bartaan dhaqan dhaqaale. Baroortu ka dib "waa la igula taliyay" waa murugo, laakiin dawada ugu fiican ee jahliga waa macluumaadka: barashada iyo wixii ka sarreeya oo aan ogaano in khaladku uusan ka jirin suuqyada, laakiin ay yihiin dadka aan aqoon sida loo maareeyo dareenkooda, waxay qaataan talo ka timaadda dadka laga yaabo inay fikrad ahaan u yar yihiin sida ay iyagu qabaan, ama ay u oggolaadaan naftooda in lagu qaado waxa ay aaminsan yihiin ee lagu soo celcelinayo sannadaha nooca nolosha ah.
Khiyaanada ugu weyn ee tobankii sano ee la soo dhaafay waxay aheyd in loogu yeero kobaca waxa dhab ahaan deynta ahaa, tan hada jirta oo loogu yeero adkeynta waxa aan aheyn qashin.
Guul kasta oo yar waa in la kasbadaa, gaaritaanka yool kastaana waa shaqo adag oo dhib badan.
Xorriyadda dhaqaalaha ayaa wax badan ka qabatay yareynta saboolnimada marka loo eego siyaasadaha kale. Musiibada wadar-ururinta adduunka ka jirta waxay caddeysay in kharashka kaligiis kaliya uu horseedo musalafnimo. "
"Si aad uga baxdo dhibaatada qoto dheer, waa inaad dhiirigelisaa xorriyadda, aad kordhisaa dakhliga la tuuri karo iyo inaad kor u qaaddo tartanka."
Waan jeclahay Sweden. Dunida oo dhami waa inay la mid noqotaa Sweden. Waxay jecel yihiin inay cabaan, dharka ka baxaan oo dadku qurux badan yihiin. Kama fikiri karo qaran ka fiican meeraha. "
"Markii cadaabta la go'aansaday in daabacaadda lacagta ay tahay siyaasad 'bulsho'?"
Samee waxaad rabto ..., laakiin masuuliyad buuxda.
Sinaan la'aanta laguma dhimayo kaalmada, laakiin waxaa lagu yareynayaa dhiirigelinno lagu abuurayo hanti. "
“Qof kasta oo shaqsi ahaan loo qaato waa mid macquul ah oo dhexdhexaad ah; haddii uu ka mid yahay dadka badankiis, markiiba wuxuu noqdaa caayaan. "
Xalalka sixirka ah ee ay noogu soo jeedinayaan marar badan waxay la mid yihiin had iyo jeer: qiimo dhac, daabacid lacag iyo samaynta deyn. Saboolnimada iyo addoonsiga. "
"Dhaqaalaha ayaa macno ahaan isku cunaya deyn."
"Awoowgay, oo ahaa nin dhaqaaqo illaa xadka, wuxuu had iyo jeer dhahaa: ka taxaddar kharashyada, waad la qabsan jirtay."
Waa kuma Daniel Lacalle?
1967-kii halyeeygeena wuxuu ku dhashay Madrid: Daniel Lacalle. Dhaqaalayahankan Isbaanishka ah wuxuu bilaabay shaqadiisa jagooyinka iyo maaraynta maalgashiga Mareykanka. Wuxuu kusii waday England, gaar ahaan London, oo ay kujirto raasamaal maalgashi, alaabo ceyriin ah iyo isbadal dakhli go'an. Waa in la ogaadaa in ay ku soo gashay codbixin aan ka badnayn kana yarayn shan sano oo isku xigta saddexda ugu sarreysa maareeyayaasha ugu fiican ee Daraasad Dheeraad ah, oo ah qiimeynta Thomson Reuters. Halkaas waxaa loogu codeeyay qaybaha soo socda: Korantada, Istaraatiijiyadda Guud iyo Saliida. Sidaa darteed waxaan u qaadan karnaa in weedhaha Daniel Lacalle ay leeyihiin aqoon asaasi ah iyo waaya-aragnimo.
Sida Spain, halkan waxaa loogu yaqaanaa joogitaankeeda warbaahinta kala duwan. Iyaga oo dhowr jeer uu difaacay xorriyadda dhaqaalaha. Sida laga soo xigtay isaga, si loo gaaro xorriyadda dhaqaale waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo qarashka dadweynaha, in loo wareejiyo qaybaha istiraatiijiyadeed iyo in la yareeyo awoodaha Gobolka. Heer dhaqaale, dadka wax naqdiya waxay dhowr jeer ku tilmaameen Daniel Lacalle "neoliberal" iyo "ultra-liberal" dhowr jeer.
Sababta kale ee uu magiciisa noogu dhawaaqi karo waa joogitaankiisa adduunka siyaasadda. Isagu waa lataliye waxa loola jeedo arrinta dhaqaale ee Pablo Casado, oo madax ka ah PP. Intaa waxaa dheer, Daniel Lacalle waxaa lagu soo daray booska afaraad ee liiska PP si loo galo doorashooyinka Golaha Wakiillada ee dhacay Abriil 2019. In kasta oo loo doortay ku-xigeen, Lacalle wuxuu iska casilay inuu daqiiqadaha uruuriyo, oo macnaheedu yahay inuu iska casilay kursigiisii. Sida laga soo xigtay isaga, wuxuu sidaa yeelay ka dib markii uu aad uga fikiray arrintaas.
Dhaqaalayahankan sidoo kale waa la yaqaan qoritaanka buugaag dhowr ah oo ku saabsan dhaqaalaha, taas oo aan ka heli karno fikrado, dhaleecayn iyo talo bixin ka badan weedhihii Daniel Lacalle. Waa kuwan liistada buugiisa:
"Safarka Xorriyadda Dhaqaalaha"
"Hooyada Dagaalada oo dhan"
«La Gran Trampa» (oo ay weheliyaan Jorge Paredes)
"Sabuuradda Daniel Lacalle"
"Aan joojino shaqo joojinta"
"Hadalka dadku wuu fahmay"
Marka laga reebo buugaagtan dhaqaalaha ka hadlaya, Daniel Lacalle sidoo kale wuxuu qorayaa tiir maalinle ah El Confidencial. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu badanaa la shaqeeyaa warbaahinta kale sida 13TV, ka BBC, ka CNBC, Dunida, Espejo Público, Dhaqaalaha, Maalgashiga, Sababta, Kan lixaad, Faallooyinka y The Wall Street Journal.
Halkee ayuu ka shaqeeyaa Daniel Lacalle?
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, sharaxaad ka bixinaysa sababta weedhaha Daniel Lacalle ay faa'iido u yeelan karaan, Madrilenian-kan ayaa ah dhaqaaleyahan iyo maareeyaha lacagaha maalgashiga. Wuxuu hadda u shaqeeyaa sidii Madaxa Dhaqaalaha Tressis. Intaa waxaa dheer, wuxuu u shaqeeyaa borofisar ka ah IEB iyo IE Business School.
Muxuu darsaday Daniel Lacalle?
Dad badan ayaa la yaabi doona waxa ninkani bartay. Hagaag, anagoo siinaya xitaa qiime dheeri ah weedhaha Daniel Lacalle, waa inaan muujinaa xirfadiisa aqooneed. Wuxuu ku guuleystay dhowr cinwaan noloshiisa oo dhan:
Degree ee Dhaqaalaha iyo Maamulka Ganacsiga ee Jaamacadda Madaxa-bannaan ee Madrid
CIIA (Falanqeeyaha Maalgashiga Caalamiga ah ee Shahaadaysan) Cinwaanka Falanqeeyaha Maaliyadeed ee Caalamiga ah
Master ee Cilmi-baarista Dhaqaalaha (UCV)
Postgraduate (PDD) oo ka socda IESE (Jaamacadda Navarra)
Tan waxaan ku soo gabagabeyneynaa macluumaadka ku saabsan dhaqaaleyahan weyn. Waxaan rajeynayaa in weedhaha Daniel Lacalle ay kuu waxyoodeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Xigasho Daniel Lacalle
Sida loo ogaado haddii aan ku jiro liistada dambiilayaasha